intshayelelo Jikelele - China Ningbo Ruking Electrical
Pattern Cutting iyelenqe
Pattern Cutting plotte
Ningbo Ruk Technology Co., Ltd. kuyinto ishishini eliphezulu-zobugcisa ukuzibandakanya kwinkqubo esizisebenzelayo mveliso, izixhobo kunye namalungu ezinxulumene nanceba, kwakunye isethi yayo epheleleyo R yenkqubo kaThixo & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo ngokubanzi.
Sinento liqela leengcali ibe ngabantu abanobuchule ingqibelelo, abayithintelayo isithuba obalulekileyo ezichaphazelekayo, iSebe, oomatshini, elektroniki, software yekhompyutha kunye nolawulo. Kwakhona kufuneka intsebenziswano kwi-R & D yeprogram kakuhle-bazi yunivesithi ekhaya naphesheya, ingakumbi esizisa iteknoloji eYurophu kunye neengcali. Ngokuzimeleyo saphanda baza CAD / cam integrated system ukusika NC, kwakunye isilawuli nokuqhuba babefuna entsimini esizisebenzelayo. Neemveliso lisetyenziswa ngokuthe mveliso ezininzi ezifana yesikhumba, izihlangu, nezambatho, ibhegi, ukupakishwa, iplastiki izinto bhetyebhetye, izinto compound, izixhobo umatshini kunye electron. Siqalisa ngokupheleleyo ISO9001 inkqubo yolawulo lomgangatho, yaye baye baphumelela igunya lokukhutshwa kwezatifiketi ekhaya naphesheya.
technology Ruk ukugcina ingqondo ngokoqobo kunye ezintsha njengoko umoya lwamashishini, ngentliziyo njengoko inkonzo ukukhulelwa. Sithembela ngokupheleleyo ukuzuza yindumiso yakho kunye nokuthembela nge ezisemgangathweni ophezulu, inkonzo ngokunyanisekileyo uze wenze ixabiso zabaxhamli phantsi imigudu yethu wenkuthalo.
ixesha Post: Mar-06-2018
technology Ruk ukugcina ingqondo ngokoqobo kunye inno ...